किन चिलाउँछ हत्केला ? जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
हत्केला चिलाउनका केही कारण यस प्रकार छन्
प्राइमेरी बिलियरी सिरहोसिस
लिभरसँग सम्बन्धित समस्याले पनि हत्केला चिलाउन सक्छ। कलेजोमा गम्भीर समस्या नआउँदै हत्केला र खुट्टाको पैतला चिलाउँछ। चिलाउने समय र अवस्था फरक फरक हुन्छ। कहिले अकस्मात हुन्छ भने कहिले दिन वा रातमा मात्र चिलाउँछ। रगत प्रवाह गर्ने प्रणालीमा र विशेष गरी लिभरमा एसिड उत्पन्न (बाइल एसिड) हुँदा हात हत्केला चिलाउँछ। हात चिलाउने समस्या रोक्न एन्टिहिस्टामाइन दिइन्छ।
खानेकुराको एलर्जीले पनि हत्केला चिलाउँछ। कसैकसैलाई कुनै खानाले एलर्जी गरिहाल्छ र त्यसको असर हत्केलामा देखिन्छ। अन्डा, बदाम, दूध र समुद्री खानेकुराले पनि कसैकसैलाई एलर्जी बनाउँछ। यी खाना खानेबित्तिकै कोहीकोहीलाई एलर्जी भइहाल्छ।
(नाडीेको हड्डीको नसारुमा भएको चोटपछि हात र औलामा हुने पीडा) पनि हत्केला चिलाउँछ। शरिरमा मध्यम खालको नसा दबिएमा कार्पेल टनेल सिन्ड्रोम हुन्छ। अध्यधिक लेख्दा, टाइप गर्दा तथा हात र औलाहरुको बढी प्र्रयोग हुदा यस्तो अवस्था आउँछ। असन्तुलित तरिकाले हत्केला चिलाउनु कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको संकेत हो।
छालाको समस्याले पनि हत्केला चिलाउँछ। छालासमबन्धि यो रोग लाग्दा औलाहमा प्रभाव पार्छ। गर्मी र जाँडो मौसममा यसले प्रभाव पार्छ। अधिकांश इसेज्माको उचित उपचार छैन।
​हत्केलामा पसिना आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुस्
गर्मि मौसममा प्राय सबैको शरीरमा पसिना आउने गर्दछ । शरीरको विभिन्न भागमा मानिसलाई पसिना आउने गर्दछ ।त्यसले गर्दा धेरै काम गर्न अबरोध आउछ । ​हत्केलामा पसिना आउछ यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् ।
१. टलकम पाउडर
यदी तपाईको हातमा पसिना आइरहने समस्या छ भने टलकम पाउण्डर लगाउनुहोस् । यसले तपाईको हातमा आएको पसिना सोस्ने काम गर्छ ।
जसका कारण तपाईको हातमा पसिनाले समस्या दिनेछैन । यो पाउडर तपाईले सजिलै बोक्न पनि सक्नुहुन्छ ।
२. तेज पत्ता
३. काचो आलु
Don't Miss it बालकालिकाको कान किन पाक्ने गर्छ ? बेलैमा उपचार नगरे यस्ता असर देखा पर्नसक्छ
Up Next कस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले खानु हुँदैन तितेकरेला ? जान्नुहोस्